'न्यायापालिका र डा. केसी दुवैको इज्जत नजाओस्' - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडाैं । शत्र गते फिल्मको छायांकन सकेर हरिवंश आचार्य पारिवारिक भ्रमणका क्रममा विभिन्न सहरमा निस्किएका छन् । मंगलबार उनले पाल्पा तानसेनस्थित होराइजन होम स्टेमा बसे । उनीसँग देशको समसामयिक परिस्थितिमा रहेर नागरिक दैनिकका लागि मुक्तिप्रसाद न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।
मह सञ्चारले बनाइरहेको फिल्म ‘शत्रु गते’ को सुटिङ सकियो । सुटिङ सकिएको समयमा यसो बाहिर घुम्न जाऔं होम स्टे पनि स्वाद लिउँ भनेर पारिवारिक भ्रमणमा छु । होम स्टेलाई विदेशीहरू नेपाली संस्कृति पढ्ने बुझ्ने अवसरका रूपमा लिन्छन् । नेपालको आफ्नै किसिमको पर्यटनमा सम्भावना छ ।
‘चिना हराएको मान्छे’ र ‘हरिबहादुर’पछि पाठकहरुले तपाईंका अन्य कृति पढ्न पाउँछन् कि ?
यसबारेमा मैले केही त सोचिरहेको छु । २÷३ वर्षभित्र पुस्तकको लागि केही न केही गर्छु होला । मदन दाइ र मैले काम गरेको ३८ वर्ष लाग्दैछ । हामिले बनाएको थुप्रै हास्यव्यंग । तिनीलाई किताबको रूप दिन सकिन्छ । ती प्रहसन, गाउँखानेकथालाई किताबका रूपमा प्रकाशन गर्न सके लाभदायक नै होला जस्तो लाग्छ । पछिल्लो पुस्तालाई पहिले हास्यव्यंग कसरी लेखिन्थ्यो, कसरी काम गरिन्थ्यो भन्ने ७/८ वटा किताब पनि लेखिन्छ होला । वैशाख जेठसम्म सय पृष्ठको एउटा किताब निकाल्ने योजना छ ।
म अरु बेलामा जोक गरेर हिँड्दिन । तर मलाई जहाँ पनि मान्छेहरूले जोक नै गर्छन् । मैले हास्य व्यङ्गको इमेज दिने भनेको टिभिमा, क्यामेरा अगाडी र रंगमञ्चमा मात्रै हो । त्यो भन्दा बाहेकको जीवनमा मलाइ सरलता नै मनपर्छ ।
डा. केसीको पछिल्लो अनसन र न्यायापालिकाको कुरा देशमा चर्चामा छ, यसबारेमा तपाईंको धारण के छ ?
मान्छेले राम्रो चिजलाई समर्थन गर्नुपर्छ, नराम्रो चिजलाई विरोध गर्नुपर्छ । डा. केसीले गर्नुभएका कुराहरूले उहाँ नेपाली जनताका बीच लोकप्रिय पनि हुनुभएको छ । उहाँले उठाउनुभएको केही–केही कुरा ठीक छन् । न्यायापालिकासँग जुन विभेद उत्पन्न भाको छ, अब न्यायापालिकाको पनि इज्जत नजाओस्, उहाँको पनि इज्जत नजाओस् । न्यायापालिकाले पनि आफ्नो इज्जत जाने किसिमका काम गर्नु हुँदैन । हामीले पनि न्यायापालिकाको इज्जत राख्नुपर्छ । अहिले न्यायापालिकाको पनि धज्जी उडिरहेको अवस्था छ । सबै कुरामा निराशा भएको स्थितिमा न्यायापालिकाको पनि इज्जत भएन भने अब कसको इज्जत रहला ? अाजको नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।